लेनोवो पीसीहरूमा सुपरफिश: यो के हो, कसले यसलाई असर गर्छ, र यसलाई कसरी हटाउने ग्याजेट समाचार
पाब्लो ओर्तेगा | | सामान्य, हार्डवेयर, कम्प्युटरहरू, सफ्टवेयर
शब्द सुपरफिश तपाईंलाई परिचित लाग्दैन जस्तो यो यस हप्तामा पकड गर्न सुरु नभएसम्म। यो एक एडवेयर हो जसले लेनोभो प्रयोगकर्ताहरूलाई हानी पुर्‍याएको छ। कम्पनीले यस एडवेयरको साथ कम्प्युटरहरूको एक श्रृंखला मार्केटिंग गर्दै छ जुन कुनै पनि ह्याकरलाई हाम्रो व्यक्तिगत जानकारी प्रदान गर्दछ। यो जान्नु महत्त्वपूर्ण छ सुपरफिश के हो र यसले टोलीहरूलाई कसरी असर गर्दछs जसले यो एडवेयर एकीकृत गर्दछ, किनकि यदि तपाईंसँग सुपरफिशको साथ लेनोभो कम्प्युटर छ भने यो सुझाव दिइन्छ कि तपाईंले यस कार्यक्रमलाई सकेसम्म चाँडो हटाउनुहोला।
सुरुमा, लेनोवोबाट उनीहरू चुप लागे र यस विषयमा कुनै टिप्पणी गरेनन्, यद्यपि उनीहरूले दर्ता गरेका दर्जनौं परीक्षणहरू सबै ठाउँमा प्रकाशित भएता पनि। अन्तमा, दुई दिन अघि, धेरै कम्पनी प्रवक्ता सुपरफिशको अस्तित्वलाई मान्यता दियो तिनीहरूको टोलीमा र यसको लागि माफी मागे। घण्टौं पछि, लेनोभोले एक उपकरण जारी गर्‍यो जुन प्रत्येक प्रयोगकर्तालाई सुपरफिशलाई छिटोबाट मुक्त गर्न मद्दत गर्दछ। यस गाईडमा हामी सुपरफिससँग सम्बन्धित प्राय जसो प्रश्नहरूको उत्तर दिन्छौं र तपाईंलाई देखाउँदछौं एडवेयर कसरी हटाउने.
1 सुपरफिश भनेको के हो? तपाईको जोखिम के हो?
2 के लेनोभोले सुपरफिस मार्फत नाफा कमायो?
3 कुन समुहले सुपरफिसलाई असर गर्छ?
4 यदि मेरो कम्प्युटरमा सुपरफिश स्थापना भएको छ भने मैले के गर्नु पर्छ?
5 मैन्युअल रूप बाट सुपरफिश कसरी हटाउने
सुपरफिश भनेको के हो? तपाईको जोखिम के हो?
हामी यो सेक्सन लेनोभोका प्रवक्ताहरूको कथनहरू स by्कलन गरेर शुरू गर्दछौं। यी आधिकारिक स्रोतहरूका अनुसार, "कम्पनीले प्रयोगकर्ताहरूको फाइदाको लागि सुपरफिश स्थापना गर्यो, ताकि उनीहरूसँग ब्राउजिows अनुभव पाउन सकून्। अनुकूलन को एक उच्च स्तर«। लेनोभोबाट उनीहरूले यो आश्वासन दिएका छन् कि उनीहरूलाई यो सफ्टवेयर प्रयोग गर्ने सबै सुरक्षा खतराहरू बारे थाहा छैन। लेनोवो विशेषज्ञहरु लाई सुपरफिसका खतरहरु मात्र थाहा पाए एक पटक बिहीबार, फेब्रुअरी १ ​​on बाट यसलाई अलग गर्न शुरू गरे। सुपरफिश एक अनुप्रयोग हो जुन प्रयोगकर्ताहरू शपलाई मद्दत गर्न डिजाइन गरिएको छ। यस अनुप्रयोगले ब्यानरहरू र नेभिगेसनमा लिंकहरू लगाउँदछ, यस्तो कुरा जुन एक भन्दा बढि प्रयोगकर्ताका लागि अत्यन्त असहज हुन सक्छ।
सुपरफिश एक हो एडवेयर यसको आफ्नै सुरक्षा प्रमाणपत्र स्थापना गर्न सक्षम छ, जसले तपाईंलाई केहि HTTPS वेब जडान मानक बाइपास गर्न सहयोग गर्दछ। यो एडवेयरले जानकारीलाई गुप्तिकरण गर्ने तरिका यति कमजोर छ कि यसले दर्जनौं सुरक्षा प्वालहरू खुला पारेको छ, हाम्रो जानकारी उजागर गर्दै। कुनै पनि ह्याकरले यी जोखिमहरू पीडितको ईमेलमा पहुँच डाटा चोरी गर्न प्रयोग गर्न सक्दछन् र उनीहरूसँग बैंक खाताहरू पहुँच गर्न ढोका खोलिनेछ। यस बिन्दुमा हामी यो कुरा पुष्टि गर्न सक्दछौं कि सुपरफिसको खतरा स्पष्ट भन्दा बढी छ।
यो घोटाला प्रकाश पछि एक दिन पछि, संयुक्त राज्य सरकारले साइबर सुरक्षा बयान जारी गर्‍यो सबै लेनोभो प्रयोगकर्ताहरूलाई एडवेयर हटाउन सिफारिस गर्दै। होमल्याण्ड सुरक्षा विभागले समेत यो सफ्टवेयरलाई «को रूपमा मूल्या rated्कन गरेको छ।स्पायवेयर"।
लेनोभोको सीटीओ पिटर होर्टेनियससले आश्वासन दिएका छन "सुपरफिस प्रयोगकर्ताको सुरक्षामा हमला गर्न प्रयोग भएको छैन"। सीटीओले भने कि "यो बुझ्नु महत्वपूर्ण छ कि सबै उपलब्ध कार्यक्रमहरू सबैको चासोमा हुँदैनन्। हामीले सुपरफिस सोचेका थियौं कि यो निश्चित व्यक्तिहरूको लागि चासोको विषय हो, तर स्पष्ट रूपमा हामी कहिले पनि सोच्न सकेनौं कि यसले अवांछनीय प्रभाव पार्छ।
अर्को तार्किक प्रश्न सोध्नु हो कि होइन सुपरफिशले प्रयोगकर्ताहरूलाई असर पुर्‍यायो। अहिले यसको कुनै स्पष्ट प्रमाण छैन। एक सुरक्षा विशेषज्ञले कार्यक्रमको खुला छोडेका यी प्वालहरूको फाइदा उठाउँदै के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा शुक्रबार सार्वजनिक गरियो। यद्यपि लेनोभोले ग्यारेन्टी गर्न सकेको छैन, कम्तिमा अहिलेको लागि, यदि हैकरहरूले यी सुरक्षा फाटोहरूको प्रयोग गरिरहेका छन्।
के लेनोभोले सुपरफिस मार्फत नाफा कमायो?
कम्पनीले भर्खरको घण्टामा आफ्नो प्रारम्भिक स्थितिको रक्षाको लागि ठूलो आलोचनामा आएको छ: कि यो अनुप्रयोग प्रयोगकर्ताहरूको लाभको लागि स्थापित गरिएको थियो, जब वास्तवमा लेनोभोले एक कमिशन लिने छ प्रत्येक "क्लिक" को लागी वा प्रभावित प्रयोगकर्ताहरु को खरीद को लागी। ठिकै छ, कम्पनीका कुनै प्रतिनिधिले पुष्टि गर्न वा अस्वीकार गर्न चाहेका छैनन् कि वास्तवमा खरीद उपकरणमार्फत आर्थिक फाइदा प्राप्त भयो। यसको बारेमा पारदर्शी जानकारी दिनुको सट्टा, कम्पनीले अर्को तरिकाले स्वीप गर्न छनौट गर्यो: “हामीले कुनै पनि प्रयोगकर्तालाई सुपरफिश स्थापना गर्न कहिले जबरजस्ती गरेका छैनौं। प्रत्येकले ए मा क्लिक गरेर स्थापनाको पुष्टि गर्नुपर्‍यो हो«पिटर होर्टेनसियसले जोर दिए।
ती के गर्ने अधिक अनुभवहीन प्रयोगकर्ताहरू सुपरफिश को हो भनेर वास्तवमा कसलाई थाहा थिएन वा त्यो सामान्य उपयोगकर्ता जसले चीजहरू राम्रोसँग पढेन नगरी सबैमा "हो" क्लिक गर्दछ? लेनोभोको दृष्टिकोण यस सम्बन्धमा केही अस्पष्ट देखिन्छ र कुरा स्पष्ट पार्दैन।
कुन समुहले सुपरफिसलाई असर गर्छ?
लेनोवोले शुरूबाट नै आश्वस्त गरायो कि सुपरफिस स्मार्टफोन, ट्याब्लेट वा मा स्थापना गरिएको थिएन उपकरण व्यापार दुनिया मा विपणन। पछिल्ला अवस्थाहरूमा, परिणामहरू अझ ठूलो हुने थियो किनभने प्रभावित कम्पनीहरूका सबै गोप्य जानकारीहरू कुनै पनि ह्याकरले आक्रमण गर्ने सम्भावना भए।
कम्पनीले एक पूर्ण र पारदर्शी सूची सुरू गर्‍यो जुन सबै कम्प्युटरहरू जुन तपाईंले सुपरफिस स्थापना गर्नुभयो कपडाको। यहाँ छ:
जी श्रृंखला: G410, G510, G710, G40-70, G50-70, G40-30, G50-30, G40-45, G50-45
U श्रृंखला: U330P, U430P, U330 टच, U430 टच, U530 टच
वाई श्रृंखला: Y430P, Y40-70, Y50-70
Z श्रृंखला: Z40-75, Z50-75, Z40-70, Z50-70
एस श्रृंखला: S310, S410, S40-70, S415, S415 टच, S20-30, S20-30 टच
फ्लेक्स श्रृंखला: फ्लेक्स २2डी, फ्लेक्स २ १D, फ्लेक्स २ १, फ्लेक्स २ १,, फ्लेक्स २ १ (बीटीएम), फ्लेक्स २ १ (बीटीएम), फ्लेक्स १०
MIIX श्रृंखला: MIIX2-8, MIIX2-10, MIIX2-11
योग श्रृंखला: YOGA2Pro-13, YOGA2-13, YOGA2-11BTM, YOGA2-11HSW
ई श्रृंखला: E10-30
लेनोभो लाई संकेत गर्न असफल भएको छ कम्प्युटरहरूको सहि संख्या जुन प्रभावित हुनसक्थ्यो र स्पष्ट रूपमा कम्पनीबाट तिनीहरूको यो आंकडा सार्वजनिक गर्ने कुनै इरादा छैन। अर्को तरीकाले तपाइँको कम्प्युटरमा "संक्रमित" छ कि छैन भनेर जान्नको लागि सुरक्षा फिलीप्पो भाल्सोर्डा द्वारा सिर्जना गरिएको यो परीक्षण प्रयोग गरीरहेको छ।
यदि मेरो कम्प्युटरमा सुपरफिश स्थापना भएको छ भने मैले के गर्नु पर्छ?
लेनोभोबाट तिनीहरूले यस विषयमा ब्याट्री राखेका छन्। सुरुमा कम्पनीले यसबारे निर्देशनहरू जारी गर्दै एक विज्ञप्ति जारी गर्यो मैन्युअल रूप बाट सुपरफिश स्थापना हटाउने, तर उनले थपे कि उनको सफ्टवेयर विशेषज्ञहरूको टोलीले पहिले नै एक उपकरणको विकास गरिरहेको छ जसले सम्पूर्ण प्रक्रिया स्वचालित रूपमा पूरा गर्दछ।
सुपरफिश हटाउन प्रोग्राम अब उपलब्ध छ र फेला पार्न सकिन्छ लेनोभो आधिकारिक वेबसाइट। एकचोटि डाउनलोड भएपछि, उपकरणले केवल हेरचाह गर्नेछ सुपरफिश हटाउनुहोस्, तर यसले एडवेयरले हाम्रा ब्राउजरहरूमा छोडेको सबै सुरक्षा प्वालहरू बन्द गर्ने पनि ख्याल राख्दछ।
हप्ता भरि सुपरफिससँग भएको सबै कुरा थाहा नहुने मानिसहरूलाई के हुन्छ? लेनोभोले माइक्रोसफ्ट र म्याकॅफीसँग सँगै काम गरिरहेको छ ताकि उनीहरूको सुरक्षा उपकरणहरू adware पत्ता लगाउनुहोस् र यो संगरोध। वास्तवमा हेरचाह गर्न माइक्रोसफ्टले आफ्नो डाटाबेस अपडेट गरिसक्यो ब्लक सुपरफिस प्रभावित कम्प्युटरमा। यसैले, समस्या व्यावहारिक रूपमा आफैंले समाधान गर्ने छ, जो कोहीले यसको बारेमा कुनै जानकारी देखेका छैनन्।
मैन्युअल रूप बाट सुपरफिश कसरी हटाउने
यदि तपाईं सुपरफिश आफैंलाई मार्न चाहनुहुन्छ भने, अनुसरण गर्नका लागि चरणहरू सरल छन्। हामीले गर्ने पहिलो कुरा भनेको कार्यक्रमको स्थापना हटाउनु हो। यो गर्नका लागि हामी हाम्रो विन्डोज कम्प्युटरमा खोजी विकल्पमा जान्छौं र «प्रोग्रामहरू हटाउनुहोस्» मा क्लिक गर्नुहोस्, «प्रोग्रामहरू थप्नुहोस् वा हटाउनुहोस् on मा क्लिक गर्नुहोस्। सूचीमा यो नाम फेला पार्नुहोस्: «सुपरफिश इंक भिजुअल डिस्कवरी»र« अनइन्स्टल on मा क्लिक गर्नुहोस्।
प्रोग्राम स्थापना हटाए पछि, तपाइँको प्रमाणपत्रहरू केहि अझै ब्राउजरहरूमा भण्डारण हुन सक्छ। को लागी इन्टरनेट एक्सप्लोरर, गुगल क्रोम, ओपेरा, सफारी र म्याक्सथनबाट त्यस्ता प्रमाणपत्र हटाउनुहोस्, खोजी खोल्नुहोस् र «प्रमाणपत्रहरू enter प्रविष्ट गर्नुहोस्: computer कम्प्युटर प्रमाणपत्रहरू प्रबन्ध गर्नुहोस् on मा क्लिक गर्नुहोस्। यदि तपाइँ विन्डोज सुरक्षा सन्देश सोध्नुहोस् यदि तपाइँ परिवर्तनहरू आधिकारिक बनाउन चाहानुहुन्छ भने, "हो" मा क्लिक गर्नुहोस्।
नयाँ विन्डोमा, "विश्वसनीय रूट प्रमाणीकरण प्राधिकरणहरू" र विन्डोको दायाँ भाग खोजी गर्ने फोल्डर खोज्नुहोस्। सुपरफिश। दायाँ माउस बटनको साथ क्लिक गर्नुहोस् र तिनीहरूलाई मेटाउनुहोस्।
Para फायरफक्समा प्रमाणपत्रहरू हटाउनुहोस्, ब्राउजर सेटिंग्स को उपयोग गर्नुहोस्, विकल्प - उन्नतमा जानुहोस्। "प्रमाणपत्र" ट्याबमा क्लिक गर्नुहोस् र त्यसपछि "प्रमाणपत्रहरू हेर्नुहोस्" मा क्लिक गर्नुहोस्। "प्राधिकरणहरू" सेक्सन अन्तर्गत, सुपरफिश खोज्नुहोस् र मैन्युअली ती सबै प्रमाणपत्रहरू मेटाउनुहोस्।
तपाईंको कम्प्युटर सफा भएको छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: ग्याजेट समाचार » कम्प्युटरहरू » हार्डवेयर » लेनोभो पीसीहरूमा सुपरफिश: यो के हो, कसले यसलाई असर गर्छ, र यसलाई कसरी हटाउने
हेडप्रोटोक्ट: विन्डोजमा मालवेयरको लागि जाँच गर्नुहोस्